Zimbabwe Inocheredza reZuva Africa Day
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzemu Africa mukucherechedza pamwe nekupemberera zuva reAfrica Day.
Masangano akasiyana siyana anosanganisira Media Institute of Southern Africa – Zimbabwe Chapter, bato re MDC-T, sangano revadzidzi reZINASU, Restoration of Human Rights, sangano revashandi reZCTU, pamwe nesangano re National Constitutional Assembly, aita muonera pamwe pahurongwa hwekucherechedza zuva iri.
Masangano aya aungana achitaura pamusoro pezvishuviro zvevana veZimbabwe achitarisa nhoroondo yenyika kubva payakawana kuzvitonga muna 1980.
Vachitaura pahurongwa uhu, mutungamiri we ZCTU, Va Lovemore Matombo, vati Zimbabwe haina kuwana kuzvitonga kuti igoomesera zvizvarwa zvenyika. VaMatombo vati zvakakosha kuti hurumende iremekedze kodzero dzevanhu munyika.
Sachigaro veNCA, Va Lovemore Madhuku, vataurawo pahurongwa uhu vachiti vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kumira dzisimbe vachiona kuti zvinhu zvavanoda kuti zvigadziriswe, zvagadziriswa. VaMadhuku vatiwo kunyange hazvo SADC iri kuedza kugadzirisa zviri kunetsa muZimbabwe, SADC yega haikwanise kuita zvinodiwa nevana veZimbabwe, nokudaro vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kushinga mukuzadzisa shuviro dzavo.
Sangano re MISA-Zimbabwe rinotiwo zvinorwadza kuti makore makumi matatu Zimbabwe yasununguka, nyaya dzenhepfenyuro munyika dzichakasarira shure zvikuru, ukuwo mitemo inodzvanyirira vanhu, vatori venhau nezvimwe, ichiri kushandiswa munyika.
MDC-T yatiwo haisi kufara nekuti nyika iri kucherechedza zuva reAfrica Day vana ve Zimbabwe vachimbunyikidzwa nehurumende.
Vakafanobata chinzvimbo chegurukota rinoona nezvekunze kwenyika, Va Herbert Murerwa, vatiwo havasi kufara nezviri kuitika kuLybia vachiti zvinoratidza kuti nyika dzekumavirira dzichiri kuda kutonga Africa nezvinhu zvayo.
Dindingira rezuva reAfrica Day ranga riri rekusimbaradza vechidiki munyaya dzebudiriro, kana kuti Youth Empowerment and Sustainable Development. Gurukota rezvevechidiki, Va Saviour Kasukuwere, vaudza musangano uyu kuti vacharamba vachienderera mberi nehurongwa hwavo hwekutora hupfumi kuvachena vachihuendesa kuvatema, zvikuru kune vechidiki.
Munyori munkuru musangano re Voluntary Media Council, VaTakura Zhangazha, vanoti zuva reAfrica Day rakakosha zvikuru uye rinofanirwa kuramba richiremekedzwa nguva dzose.
Nyanzvi mune zvematongerwe enyika, avo vanotaura vakarerekera kumafungiro eZanu PF, Va George Shire, vanoti ichokwadi kuti Africa Day rinofanirwa kuremekedzwa.
Hurukuro naVa Takura Zhangazha